Mutambo: An Omni-Chiteshi Yakakwana Inotengeswa Inotengeswa Enablement Platform | Martech Zone
Sebhizimusi diki, ini ndaigara ndichinetseka nekutengesa. Yakanga isiri iyo kutengesa nzira ndiyo yaive nyaya, zvaive zviwanikwa zvinoda kuramba zvichibatsira tarisiro yekusvika kumagumo. Chaitove chikonzero chakakosha nei ini ndakatanga yedu Salesforce Partner kambani, Highbridge. Vamwe vangu vakanyatsonzwisisa kuti kuve nemaitiro uye zviwanikwa munzvimbo yekufambisa rwendo rwekutengesa kumberi hwaro hwebhizimusi riri kukura. Chero bedzi ndakanga ndiri ndega, ndaizobudirira… asi ndinenge ndisiri kukura.
Dambudziko rinotevera ndere multi-tasking iyo inodiwa kubatsira vatengi. Ndiri kunyatsoshamiswa nemaitiro angu VP eBusiness Development ari kuteedzera nekubata vazhinji vevadyidzani, vamiririri, uye tarisiro pasvondo. Uropi hwangu hahungakwanise kuita izvi. Ndiri kugara ndichimudaidza maminetsi gumi neshanu musangano usati wamubvunza kuti andiyeuchidze kuti ndiani tarisiro uye nei tiri kutaura navo!
Kutengesa kubatanidzwa kwakakosha kune yekutengesa maitiro. Kuteerera tarisiro yezvinodiwa uye kuvabatsira kutora danho rinotevera kunosimudzira rwendo uye kusangana kunovaka kuvimba netarisiro yako yekuti uri shamwari yakavimbika.
Maitiro Ekubuda Ekutengesa
Usati watsvaga chekushandisa otomatiki chishandiso, ini ndaikurudzira zvikuru kuti ufungezve nezvekushandisa imwe yemapuratifomu, zvakadaro. Ini ndakazadzwa neemail nemidziyo inoenderera kungoita nag, nag, nag neni nemameseji ekubvunza kana ini ndawana wekupedzisira meseji. Ndinoziva kuti ichi chishandiso chiri kuita izvi uye chiri kutsamwa. Panzvimbo pokupindura, ini ndinozvinyora kana kuzivisa maemail acho seasina basa. Mune mamwe mazwi, unogona kukuvadza zvakanyanya nekutengesa mapuratifomu kupfuura zvaunogona kuita zvakanaka - kana usiri kuvashandisa kuzere kugona kwavo.
Sezvo iwe paunogadzira yako otomatiki, ini ndinokurudzira zvikuru kushandisa yega yega yekubata poindi yekuwedzera kukosha kune iyo hurukuro. Saka, pachinzvimbo cheyomuchina meseji iyo inobvunza kana ini ndagamuchira yako yekupedzisira meseji ... pachinzvimbo email inoti, chimwe chinhu chakadai chingave chiri nani:
Ini handina kugamuchira chero mhinduro kune yekupedzisira meseji uye ndinovimba handisi kukunetsa. Kana iwe usiri kufarira kwedu [chigadzirwa, sevhisi, nezvimwewo], ndapota usazeze kusvika uye undizivise. Zvichakadaro, isu tine raibhurari yakakura yekushandisa inowanikwa kuti ikubatsire kutsvagurudza kana isu tichava veukoshi.
* Shandisa makesi kubva kumaindasitiri senge ako. [batanidzo]
* Ebook ratakanyora pamusoro wenyaya. [batanidzo]
* Tsamba yedu yevhiki nevhiki iyo inopa kuongororwa kwezvinyorwa zvedu zvazvino. [batanidzo]
Ndingafarire kukurukura kuburikidza nemusangano - unogona kuseta yako yega musangano pano. [batanidzo]
Ndakaita zvinhu zvishoma mune ino diki muenzaniso yakakosha:
Ndakapa tarisiro mvumo yekundizivisa ivo havasi kufarira. Vanhu zvechokwadi havadi kuudza vamwe kuti vasiye kutengesa… saka kupa yako tarisiro mvumo yekuti kwete zvinoda. Izvo ngatisiye iwe uvagumbure uye zvinovapa ruremekedzo kuti hausi kuzongovanetsa zvisina kumira.
Ini ndakapa yakagadziriswa ruzivo ruzivo iyo inogona kuvabatsira ivo pachavo-kutyaira yavo yevatengi rwendo.
Ini ndakagadzirisa zviwanikwa kumaindasitiri avo uye ndikapa zvese zvipfupi uye zvakareba-fomu ruzivo kwavari kuti vagone kuchera vhoriyamu yeruzivo rwavanosarudza.
Ndakavapa nzira yekumisikidza musangano vasina kupindura email, iyo inogona kuvabuditsa mubhuku rekutamba voenda padanho rinotevera murwendo rwekutengesa.
Outplay yakaburitsa ebook iyo inosanganisa iyo yekutengesa playbook nzira dzemakambani anodarika makumi matatu:
Kumusoro Kuita Kuita Kwekuteedzana
Kunze kwekuratidzira kune yakawanda-chiteshi yekudyidzana chikuva iyo ine zvese zvaunoda pasi pechimwe chikuva kuti ikubatsire iwe zvakanyanya kuwedzera kugona kwako kukwirisa kwakawanda kuita nemumwe wevatengesi vako vamiririri. Uchishandisa dialer kutora zviitiko zvekufona uye kuvhura yako inotevera kufona, email kuti uzviteedzere zvikumbiro zvisina kupindurwa, taura kuti ubate vashanyi vewebhusaiti, injini yekumisikidza musangano kumisangano, uye yakazara analytics kuyera nekukurisa kutengesa kwako. kufambiswa kwebasa kunowanikwa mune imwe chikuva.
Outplay Zvimiro Sanganisira:
Analytics - Ramba uri pamberi pemutambo uine-zvakadzama pahurongwa hwekuteedzana pamwero wega uye wechikwata.
kushandisa michina - Gadzirisa yako yekutengesa workflows, chengetedza nguva uye usatombopotsa chibvumirano.
tauriranai - Chat iri chikamu chedu chezuva nezuva maitiro uye nekukurumidza kutaurirana chiteshi chevose. Zvino, taura netarisiro yako pavanoshanyira webhusaiti yako uye nemisangano yebhuku ipapo ipapo.
Dhiza - Kushevedzera kwepasirese uye imwe tani yezvimwe zvidhina zvekuvhara madhiri nekukurumidza. Log kufona manotsi otomatiki muCRM yako.
Email yekutevera - Indasitiri yakanakisa email kuvhura yekutevera, chinongedzo tinya kuteedzera, uye kupindura kuona kuti ikugone kusvika kumatarisiro ako pachiyero nechivimbo.
Kubatanidzwa - Kubatanidzwa neSalesforce, Crelate, Zapiet, Gmail, uye Pipedrive.
Musangano-booker - Goverana khalendari yako mukati chaimo meemail uye bhuku misangano netarisiro yako ipapo ipapo, pasina maemail ekumashure nekunze Zviyeuchidzo zviri pano kuti zvikubatsire iwe kudzikisa pasina-show.
Multichannel - Svitsa tarisiro yako chero kwavanenge vari uye tanga hurukuro nekukurumidza neakawanda nzira yekutaurirana.
Zvishandiso zvekugadzira - Chrome yekuwedzera iyo inoisa yako email pane steroid ine maficha senge akavhurika kuteedzera, chinongedzo kuteedzera, kutumira gare gare, zviyeuchidzo, misangano, matemplate, uye kuteedzana
Kuitwa kwebasa - Yakagadzirirwa kuita akateedzana mabasa nekumhanya kwechiedza pachiyero kuchengetedza 2hrs / zuva re reps nguva. Ziva kuti ndeapi mabasa ekuita, riini, uye kumhanya zvese pasina kubhurawuza pakati pemapeji.
Webhusaiti Yekutevera - Shanyira zviziviso uye tarisiro yekubhurawuza maitiro ewebhusaiti yako kunobatsira iwe kuverenga pfungwa dzavo uye kugadzirisa hurukuro kuti dzimire uye tendeuka nekukurumidza.
Outplay ine 14-Mazuva Mahara Muedzo iwe waunogona kusaina kuti utarise chikuva chavo:
Outplay Yemahara Muedzo
Tags: dialergsuite kusangananzira yekunyora email yekutengesa inobudamusangano webhukumisangano yepamhepoyakabuda dialeremail yekutengesa inobudaoutbound email email matipikunze kwekutengesa kutengesamatipi anobudakutambaKugonesa Kugonesayekutengesa yekufambisa yekufambisawebhusaiti chat
Maitiro Ekumhanyisa Email Campaign neGmail